Hopitalibe Toamasina : tsy afa-niditra ny mpikarakara marary | NewsMada
Hopitalibe Toamasina : tsy afa-niditra ny mpikarakara marary
Par Taratra sur 02/08/2016
Nimenomenona avokoa ny olona mpikarakara marary sy marary tao amin’ny Hopitalibe Toamasina omaly. Nanomboka tamin’ny 7 ora sy sasany maraina, fotoan’ny fampiakaran-tsaina ka hatramin’ny 9 ora sy sasany maraina, tsy azo nidirana ny hopitaly.
Vita ny fampiakaran-tsaina tamin’ny 8 ora maraina, mbola tsy navela hiditra ny vavahady ny olona fa mbola mikabary amin’ny mpiasa ny tale. Satria baiko rahateo no azon’ny mpiambina ny vavahady ka tsy nisy afa-niditra na marary na ireo mpikarakara marary ka nivoaka ivelan’ny hopitaly nividy fanafody ilain’ny marary maika.
” Tsy fantatr’ ireo mpitsabo angaha fa ain’ olona no kirakirain’ izy ireo? Maninona raha mamonjy efitrano fivorina raha hivory sy hikabary lava fa tsy olona mpikarakara marary sy ny marary no sakanana tsy hiditra ny hopitaly?” hoy ny fimenomenon’ ny vahoaka maro teo ivelan’ ny vavahady.